ITunes 12.5.4 nwere nkwado maka Ogwe Mmetụta na Ngwa TV dị ugbu a | Esi m mac
ITunes 12.5.4 dị ugbu a na nkwado maka Touch Bar na TV App
Mgbe Apple wepụtara nsụgharị ọhụrụ nke macOS Sierra 10.12.2 ụnyaahụ na onye ọrụ ibe anyị Jordi Giménez Ọ ga-agwa anyị gbasara akụkọ ahụ na anyị ga-ahụ n'ime ya, anyị na-aga n'ihu ịgwa ndị na-eso ụzọ anyị na ewepụtarala ụdị ọhụrụ nke iTunes 12.5.4.
Ọ bụ nsụgharị ọhụrụ nke, dị ka isi akwụkwọ akụkọ, na-akwado Touch Bar nke ọhụrụ 2016 MacBook Pro na mgbakwunye na inwe ike jikwaa ihe jikọrọ ya na ngwa TV nke rutere na nsụgharị ọhụrụ nke sistemụ iOS.
Apple amalitela ụdị ọhụrụ nke ngwa nke anyị nwere ike ijikwa ọdịnaya niile nke ngwaọrụ anyị, ọ bụ ihe dị ọhụrụ iTunes 12.5.4Versiondị emelitere iji kwado 2016 MacBook Pro Touch Bars ọhụrụ, ọ na-enye nkwado maka ngwa TV ọhụrụ na iPad, iPhone, iPod touch, na Apple TV, yana mmụba nke nkwụsi ike na arụmọrụ nke onwe ya.
Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, App, ma tinye ire MacBook Pro ọhụrụ enweghị na-emelite gị niile ngwa nke mere na Touch Ogwe enwere ike iji ya rụọ ọtụtụ ọrụ dị ka o kwere mee. Ugbu a, izu ole na ole gachara abịa iTunes 12.5.4 ọhụrụ nke anyị nwere ike iji slide nke Touch Bar iji soro egwu egwu dị n'etiti omume ndị ọzọ anyị ga-atụle ka ha mara.
Ya mere ọ bụrụ na ị nwere ihe ọhụrụ 2016 MacBook Pro, gbaa ma melite ngwa iTunes na ndị nke anyị nwere laptọọpụ Apple ọzọ agaghị achọpụta ọtụtụ mgbanwe na ụdị ọhụrụ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » ITunes 12.5.4 dị ugbu a na nkwado maka Touch Bar na TV App
macOS Sierra 10.12.2 na-ewepu ihe ngosi batrị fọdụrụnụ oge na MacBooks